Fitaovana manaraka - Mpamatsy fitaovana manaraka an'i Sina, Factory –Jwell
Ity milina ity dia mety amin'ny famahanana matevina, tsara
sanding sy poloney ny ambonin'ny hafa isan-karazany
Ny milina dia ampiasaina amin'ny famolavolana endrika ambonin-trano amin'ny plastika hazo, plastika varavarana kabinetra vita amin'ny hazo, varavarana sy rindrina PVC
birao. Amin'ny alàlan'ny famindrana mari-pana avo lenta, ity masinina ity dia afaka manala vovoka ho azy ary manana fitaovana alohan'ny fanamainana.
Ny embossing vita amin'ny plastika amin'ny hazo dia ampiasaina indrindra amin'ny
lamina famoretana ny PE \_ PP \_ piraofilina vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo, ambonin'ilay ravina, tsara kokoa ho an'ny vokatra vita amin'ny hazo ny firafitry ny hazo. ny ambonin'ilay dia azo zahana karazan-kazo rehetra, ny velarana dia mety ho plating vita amin'ny Chrome mafy, lavaka mihodina fanafanana, fandidiana tsotra ary tsy mahazaka akanjo.
Ity milina ity dia ampiasaina indrindra amin'ny sary sokitra vita amin'ny hazo-plastika birao, hazo fisaka mafy, tabilao matevina ary tabilaon'ny kabinetra. Mampiasa
boribory telo ho toy ny orient orientation, lava ary miakatra sy midina. Ny sokitra rehetra amin'ny alàlan'ny solosaina.
Miara-mihodina Conical Twin-screw Extruder
PE Carbon Black Copper-plastika Composite Extrusion Line